Ngathi - Divenland
Inkampani eyingcweti yamakhemikhali ekhethekile i-redispersible powder (RDP) ne-hydroxypropyl methyl cellulose (HPMC), i-ejenti yokunciphisa amanzi nendodana on.Ngaphezu kweminyaka engu-10 yokuhlangenwe nakho kwalokhu kukhiqizwa nokukhiqizwa kwemikhiqizo, iDivenland izokunikeza izinsizakalo zobuchwepheshe obusezingeni eliphezulu. Isekelwa yizinsizakalo zokumaketha ezobuchwepheshe, iDivenland futhi ingenye yamabhizinisi esimanje obuchwepheshe obuphezulu, asungule umkhiqizo kanye nokwakhiwa kwensiza, ehlanganisa izinto zokwakha eziyimpuphu nezinto zokwakha ezintsha, ukuhlinzeka ngemikhiqizo ekhethekile, ehlanganisiwe neyenziwe ngokwezifiso nezinsizakalo zokulandelela abakhiqizi abasezansi komfula.
Ngenkathi sithuthukisa njalo ikhwalithi yomkhiqizo nokwandisa umthamo wokuhlangabezana nezidingo zokukhiqizwa kwamakhasimende awo, i-Divenland iyajabula futhi ukwenza i-OEM ngokuya ngokufunwa kwamakhasimende, ukuhlinzeka ngezinsizakalo ezisekelayo kwamanye amabhizinisi noma abathengisi .I-Divenland akuyona inketho yakho kuphela, kodwa ukukhetha okuhle kakhulu.Sinamasiko nefilosofi yethu, futhi sihlola futhi sisebenzisa ifilosofi.Ukuzibophezela kwikhwalithi kungenye yezindinganiso zethu eziyinhloko. Ngokuphathelene namakhasimende njengomlingani wethu kungenye yezimiso zethu.Sinikeza ukuxhumana okuhle, sinikeze imikhiqizo esezingeni eliphezulu nezisombululo ezifanele. Sebenzisana neDivenland, sizokusiza wenze ukhetho oluhle kakhulu lwezinto zokusetshenziswa ngentengo enhle.
Isizathu esenza amabhizinisi amaningi akhethe
IDIVENLAND izinzuzo eziyisithupha
I-Cargo STORAGE CAPACITY
Sisebenzisane namakhasimende amaningi emikhakheni eminingi, futhi izinkulungwane zamakhasimende zifakazele ukuthi sigcine izinga eliphakeme lokushintshaniswa kwezobuchwepheshe nokubambisana namanyuvesi asemqoka ekhaya nakwamanye amazwe eminyakeni edlule, futhi ubuchwepheshe bethu bebelokhu bukhona ngaphambili kulo mkhakha.
Ngodidi oluphelele lwamamodeli nesitoko esanele, umthamo oqinile wokubambisana wokubambisana, nomjikelezo wokulethwa okusheshayo, singakwazi ukuqiniseka ngokulethwa okufika ngesikhathi.
Iqembu le-3.Technical Team
Sinegama eliphezulu lokumiswa kwelabhorathri yohlelo lokusebenza lomkhiqizo, nethimba leqembu lobuchwepheshe lomkhiqizo elinolwazi, sigxile ocwaningweni nasekuthuthukisweni kwemikhiqizo emisha nasezindaweni ezintsha zethekhnoloji yokusebenzisa phambili.
Le nsizakalo ayigcini nje ngokusiza amakhasimende ahlaziye umkhiqizo ophelile ekwakhiweni kwenkinga, kepha futhi angamukela umkhiqizo oqediwe wekhasimende ukuthumela amasampula ayohlaziywa, uthole umongo wenkinga futhi uxazulule inkinga.
Umqondo oyinhloko wenkampani "ikhwalithi nobuchwepheshe", amanye amabhizinisi asekhaya aziwayo nabathengisi basekhaya bakhetha ukusebenzisana, bathembeke.
Ukugxila emkhakheni wempuphu eyomile yokwakha izixazululo, yakha uhlelo oluphelele lokuzilawula lomkhiqizo, ukuqinisekiswa kwekhwalithi yomkhiqizo, uzibophezele ekwakheni umkhiqizo owaziwayo.